Mifidy Izay ho Filoham-pireneny Manaraka ny Meksikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2012 7:24 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, বাংলা, Español, Aymara, English
Nandeha tany amin'ny birao fandatsaham-bato ireo Meksikana hifidy ny ho filoham-pireneny manaraka, tamin'ny 1 Jolay. Mbola talohan'ny fifidianana dia efa nahatsapa ny ankamaroan'ny mponin'ny aterineto fa ho fifaninanana tery dia tery eo amin'i Enrique Peña Nieto (EPN) avy amin'ny Institutional Revolutionary Party sy i Andrés Manuel López Obrador (AMLO) avy amin'ny Party of the Democratic Revolution ilay fifidianana, na dia izany aza, tsy kivy ny mpanohana an'i Josefina Vázquez Mota (avy amin'ny antokon'ny fitondrana ankehitriny). Avy dia naneho ny heviny sy ny traikefany ny mponin'ny aterineto vantany vao nisokatra ny birao fandatsaham-bato.
Nanammafy ny mpampiasa Twitter @YONOFUI hoe :
Andro voalohany ny andro androany ho anà firenena iray izay hanomboka hitombo sy hahatsapa fa raha tsy manao ny asany ny vahoaka dia tsy hisy zava-banona.
Nanjary lohahevitra nalaza vetivety naneran-tany ny tenifototra #Elecciones2012 (Fifidianana 2012).
Maro ireo mponin'ny aterineto no nanomboka nikarakara tranonkala sy tenifototra hanangonana ireo tatitra mikasika hosoka sy endrika hafa amin'ny hetsika tsy ara-dalàna toy ny fanaovana fampielezan-kevitra eny akaikin'ny birao fandatsaham-bato. Nampiasa ny iray amin'ireny tenifototra ireny, #Operacion1J, i Tonatiuh Bravo (@tonatiuhbravo), hitaterana izao manaraka izao:
Ity misy lahatsary #Operacion1J yfrog.us/gh5kgiz raha mila porofo ianao mikasika ny fividianana ny ID, kara-pifidianana
“Malalaka sy miafina ny fifidianana”. Meksikana mifidy ao amin'ny birao fandatsaham-bato tao an-tanànan'i Meksiko tamin'ny 1 Jolay 2012. Sary avy amin'i Enrique Perez Huerta, fizakà-manana Demotix.
Nirohotra nilaza vaovao ireo media malaza maneran-tany, isan'izany i Meksika, taorian'ny fampahafantarana ny ampahany voalohany tamin'ny fifidianana, hoe nampahafantatra ny Electoral Federal Institution (IFE) fa i Enrique Peña Nieto no mpandresy. Nanao fety ny mpanaraka azy raha toa kosa ka diso fanantenana ny sasany amin'ireo mponin'ny aterineto , ary ny sasany kosa miahiahy.
Maika ny hahazo fandresena i Peña Nieto na dia vao ampahany kely tamin'ny vato aza no voaisa, nofenoiny teny fisaorana sy tenim-pandresena ny kaonty Twitter-ny (@EPN), izay miteraka ahiahy amina hosoka eo amin'ireo mponin'ny aterineto.
Misaotra anareo Meksikana rehetra aho! Efa niteny ianareo ary naneho ny safidy ho amin'ny fiovana eo amin'ny fitondrana.
Erik de la Regera (@erikdelareguera) , mpanao gazety mahaleo tena , nanontany hoe :
Fanontaniana: Ahoana moa no ahafahan'ny IFE mampiseho ny fandresen'i Peña w/ 7-8% raha ny <25% amin'ny vato fotsiny no voaisa ary mbola mihatery aza ny fifaninanana
Nanondro kosa ny fiarahamonina Think Mexican (@thinkmexican) fa:
Nanjary nahazo tsindry avy amin'ny haino aman-jery, Calderón ary ny IFE ny AMLO, mba hilefitra, noho ny filazana fa mpandresy ny EPN. Inona no mahamaika? Inona no atahoran-dry zareo? Ny fiovana marina ve?
Ny Alarobia 4 Jolay no mivoaka ny valiny farany.